Wararka Gudaha – Page 240 – Shabakadda Amiirnuur
Degdeg: Dagaal Culus oo Ka Dhex Qarxay Puntland Iyo Somaliland.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in uu dagaal culusi ka dhex qarxay maamulada Puntland iyo Somaliland oo maalmihii lasoo dhaafay xurguf dhanka dhulka ahi ka dhaxaysay warbaahintana isku marinayay hadallo xanaf leh. Dagaalka oo ay ka qeyb qaadanayaan gaadiidka Tiknikada loo yaqaano iyo malleyshiyo badan oo […]
War-saxaafadeed: “Siyaasiyiin iyo Xildhibaanno Sirdoonka Dowladda Farmaajo ku tilmaamay in Ay Udhaqmayaan Sida Koofiya Castii Siyaad Barre.
Warsaxaafadeed ay soo saareen xisbiyada kala ah Daljir, Kulan Horusocod iyo Wadajir ayay eedeyn kulul ugu jeediyeen Taliska Sirdoonka dowladda Federaalka iyo hoggaanka Villa Somalia. Xildhibaannada iyo siyaasiyiinta ayaa warsaxaafadeedkoodu ku sheegay in Maleeshiyaadka NISA lagu magacaabo ay noqdeen ciidan si gaar ah ugu adeega Hoggaanka dowladda islamarkaana geysanaya falal […]
Madaafiic Lagu Weeraray Ciidamada Puntland Ee Galgala Iyo Askar Ka Tirsan DF oo Lagu Dilay Sh/hoose.
Xarakada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saaka aroortii saldhig ay ciidamada Puntland ku leeyihiin degaanka Galgala ee gobolka Bari. Dad degaan ah ayaa inoo sheegay in duqeyntu muddo ku soconeysay saldhigga taasoo u muuqatay mid bar tilmaameed sasmi ah iyadoo xilliyada qaar la maqlayay rasaas ay furayeen askarta Puntlad kuwaas […]
Saraakiil Ka Tirsan Galmudug oo Dhimasho iyo Dhaawac Ku Noqday Shil Gaari.
Wararka ka imanaya gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in saraakiil ka tirsan Galmudug ay dhimasho iyo dhaac ku noqdeen shil gaari oo ka dhacay inta u dhacaysa Gaalkacyo iyo Gallinsoor. Inkastoo aan la faahfaahin waxa u sababta ah shilkan, ayaa waxaa haddana jira in gaari xawaare sare ku socda oo […]
Labo Sarkaal oo Ka Tirsan Ciidanka Nabad Sugidda DF oo Lagu Dilay Muqdisho.
Magaalada Muqdisho oo ay dhacdooyinka joogto ka noqdeen ayaa waxaa lagu toogtay saraakiil ka tirsan ciidamada Nabad sugidda ee dowladda federalka. Toogashan ayaa ammin fiidkii ah ka dhacday bartamaha degmada Xamar weyne ee gobolka Banaadir waxaana ka dambeeyay rag bastoolado ku hubeysan kuwaasoo markii ay hawshooda fushadeen si nabad galyo […]
Diiradda Jimcaha oo Lagu Falanqeeyay Mowduuc Dhaqaale oo Muhim U Ah Islaamka. (Sawirro+Dhageysi)
Diiradda Jimcaha waa barnaamij todobaadle ah oo maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan laguna soo qaato mowduuc muhim ah. Usbuucyadii lasoo dhaafay waxaa wilaayaadka islaamiga ah ka socday qeybinta Sakada xoolaha iyadoo la bixiyay 24,654 Neef oo la siiyay dadkii uu Allaah xaqa u siiyay. Haddaba […]
Beesha Eelaay oo Ugaas Cusub Caleemo Saaratay (Sawiro Iyo Dhegeysi)
Beesha Eeelaay ayaa ugaas ku dooratay gobalka baay gaar ahaan deegaan hoos taga degmada buurhakaba. Xaflad si heersare ah loo soo agaasimay oo ka dhacday deegaanka bisiq cadde oo lixdameeyo kiilow mitir u jira buurhakaba ayaa lagu shaaciyay in in Eeelaay ugaas u dooratay ugaas maxamed ugaas suure ugaas cabdi […]
Yuusuf Garaad oo Ka Calaacalay Xilka Qaadista Lagu Sameeyay Iyo Xog Ka Waramaysa Cidda Lagu Qancinayo Eryiddiisa..
Yuusuf Garaad Cumar oo ahaa wasiirkii arimaha dibadda saddaxna ku ahaa wasiiro habeenkii xalay xilalkoodii laga xayuubiyay, ayaa si aad ah uga calaacalay tallaabada uu ku dhaqaaqay Xassan Cali Kheyrre. Isagoo isu muujinaya inuu u hadlayo hab dib lumaasiyadeed ayaa waxa uu qormadiisa ku muujiyay in markii horaba aaney Farmaajo […]
Degdeg: Kheyrre oo Xilalkii Ka Xayuubiyay Sadax Kamid Ah Golihiisa.
Ra’iisulwasaaraha dowladda federalka ah Xassan Cali Kheyrre ayaa xilalkii ka qaaday sadax kamid ag golihiisa wasiirada kuwaasoo kala ah: wasiirka arimaha gudaha, arimaha dibadda, ganacsiga iyo warshadaha. Cabdiraxmaan Yayiisow oo ah wasiirka warfaafinta ayaa saxaafadda u sheegay in Yuusuf garaad oo ah wasiirkii arimaha dibadda, Khadra Ducaale oo ahayd wasiiraddii […]